Ardayda iyo macalimiintuba waxay u arkayeen saaqid. Markii danbena maamulka dugsiga ayaa ka eryay dugsiga ka dib markii ay ku eedeeyen inu yahay mid caqli gaab ah oo u baahan dugsiyada dadka naafada caqliga qaba. Waxa uu u tegay hooyadii isagoo ooyaya. dadaalka ugu badan hooyadii ayaa u gashay oo wax bartay markii ay akhriday warqadii loo soo dhiibay.
Waxa uu samayn jiray tijaaboyin kala duwan, isagoo lacagtiisa ku iibsan jiray kolba qalabka uu u vbaahdo. Qoyskooda oo sabool noqday awgeed wuxu goostay isagoo 12 sano jiray inuu shaqo ka dhigto jaraa’idka oo uu ku iibiyo Tareenka dhexdiisa. Ujeedada ugu weyni ee uu laha waxay ahayd inuu si fudud u helo wargeysyo uu ka akhristo hadba waxa cusub ee so baxa. Tareenka dhexdiisana wuxu ka samaystay shaybaadh gaar ah.